SU-122-54 - ithangi eyayisesandleni inkonzo neSoviet Union esikhathini ngemva kwempi yezwe yesibili. Self ezinezinjini wezikhali iyunithi kwadingeka eziningi eziwusizo phezu ezazingaphambi kwayo, ezifana isibhamu ezinamandla kanye engele ezinhle, okuvumela ethangini ukwenza ngisho ngokumelene elikhulu izikhali isitha. Umlando yephrojekthi kanye prototypes yokuqala yale imodeli lide kakhulu, kodwa lokhu kuchazwe yokuthi ethangini kwadingeka ukuba into ngokuyinhloko entsha futhi bewazisa yiSoviet Union ukudlula ababengaphambi zabo futhi fikisa ahlula kuphela. Umgomo nezaba izindlela, ithangi waphuma eqinile, ophikelelayo futhi wesilisa ivelele ngokumelene isitha ababuthakathaka izimoto zempi.
Owandulela CS-122-54 wayaziwa izibhamu self ezinezinjini SU-100, egcwele ngcono akusebenzi futhi kudingeka, futhi ngokuphelele liphela ngo-1947. Kakade ngo-1948, ohulumeni bavumelana ukuqala ukuthuthukiswa uhlelo olusha ukuzilawula ngokuzenzekelayo, angathathwa ifakwe inganono 122-mm ngesisekelo CT T-54.
Lubhekele iphrojekthi waqokwa I. S. Bushnev. Zonke izibalo kwakumelwe okwethulwa Julayi 1948, kodwa kusukela ngaleso sikhathi kwase kudlule isikhathi nge ukuklanywa isibhamu ngoba ethangini, sibonelo wokuqala kwabonakala kokuhlangenwe Uhulumeni nge ukuhlonza kwezinyanga ezimbalwa - okungukuthi ngoDisemba.
Ngemva nokuqedwa ukukhubazeka imidwebo abangu kabusha wathumela ukuba sicabangisise ngezinga ikomiti ekhethekile. Ngo-August 1949 ayamukelayo kusakhiwo futhi tankostroitelny isitshalo baqala ukuzakhela zezinhlobo zokuhlola. Ngokushesha kwathiwa umsebenzi okwesikhashana ngenxa yezinguquko technical Ukucaciswa CT T-54. Kwanqunywa ukuba nesimanje ukuhleleka wokuqala nokushintsha isakhiwo ethangini, okuyinto kakhulu ehlile ukulungiswa version yokugcina project.
Amasampula kuqala futhi ukukhiqizwa
I sibonelo wokuqala wabona emhlabeni emuva lé ngawo-1950, ekupheleni okuyinto sesiphethiwe ifektri sokuhlola. ukuhlolwa owandulelayo umshini senzeka ngo-June nango-July 1951 futhi ngo-August the nyaka SU-122-54 wathunyelwa uphethwe isimo. Phakathi nesifundo, amaphutha eziningana eziye zatholakala, iziphi ke ukulungiswa ke ngenxa PT-ACS yonke imibhalo edingekayo ukuze uthumele imoto entsha ekukhiqizeni zilungiselelwe. eminyakeni embalwa Kwadlula izifundo lokhu model, ngaphambi zase zikulungele ukukhiqizwa, okuyinto akwenzekanga ngenxa yokuntuleka izibhamu efanelekayo. ACS SU-122-54 kwavunyelwana yiSoviet Union ngo-1954 bafakwa ukukhiqizwa ngo-1955 imoto sidalwe ngamaqoqo amancane, inani lamakhophi siphelile babe izicucu 100.
ukukhiqizwa Tank yaba ngeyesikhashana, kungenxa yokuthi ngokushesha ukuthuthukisa amaphrojekthi amasha, namandla kakhulu ithangi izikhali. Abaklami abathintekayo ekudalweni yezikhali ezicitshwayo, kokubili eliwumhlaba kanye zasolwandle, imicibisholo oluqondiswa okwakukhona olunembile okuningi. Ngakho-ke, ethangini is yisikhathi futhi ngeke isakwazi ekhishwe maduze. I amakhophi asele kungabonwa ethangini Museum Kubinka.
Amatilosi kunabantu 5.
ACS isisindo amathani 35.7.
Tank Ubude 9,97m.
Ukuphakama - 2,06m.
Engaphelele zempi - 100 mm.
Side zempi - 80 mm.
Speed umkhawulo - 48 km / h.
Machine gun - 2 * KPVT 14.5 mm
Ammunition - 35 imizuliswano / cartridges 600.
Ibanga - 13.4 km.
amandla Engine - 52 amahhashi.
Amatilosi self ezinezinjini wezikhali iyunithi yakhiwa amadoda amahlanu: kumlawuli, umdubuli kambayimbayi, umshayeli Loaders ezimbili (kwesokunxele bese kwesokudla). I SU-122 ngokwahlukana kuhlanganiswe ukuphathwa ukulwa evumela wonke amalungu ethimba izisebenzi ukuxhumana ngokukhululekile.
Ngenkathi kwakhiwa ethangini sizogxila kakhulu wabekwa ukubhuka nokuvikelwa. Ikakhulukazi Abadali uhlupho mayelana gumbi okuyinto abilisiwe kusuka amapuleti zempi ukuze engeli ukuthambekela kukhona esiphezulu, futhi kungakho kungenzeka Rebound anda. I ukushuba we zempi frontal safinyelela 100 mm i-ukuthambekela 51 degrees, okuyinto wanika phambi ethangini ezingeni elikhulu sokuvikeleka.
Njengoba injini diesel kuyinto emzimbeni ohlangothini transverse, kungenzeka ukuze ithuthukise gumbi injini-ukudluliswa futhi kwenze kube emfishane. Ukumiswa, ukuwudlulisa amandla plant ezathathwa eyandulela PT ACS CS-122-54 futhi ngandlela-thile modified.
Umshini ogibele isibhamu D-49, okungase inflict akukho umonakalo esingaphansi sikhali ithangi esindayo Soviet IS-3. I-engeli yokuba phansi futhi unqamule lokhu isibhamu kwaba degrees 16. I isibhamu nayo ifakwe i ejector neziqhumane rammer, esiklanyelwe ukusiza ukuthuthukisa izinga icala nezibhamu ukuze 5-6 imizuliswano / ngomzuzu.
D-49 yafakwa phambi gumbi izindlu, owawungumnyaka ngokwayo ingxenye i tank zempi. Ngo izinhlamvu SU-122 afakwe ezihlukahlukene projectiles, kuhlanganise udibi ukubhoboza, amabhomu ephezulu obhubhisayo howitzer ejwayelekile. D-49 ngesikhathi abhanqiwe nge a KPVT machine gun, kokuba uhlelo emoyeni lingatshajwa, okwakubekelwa efakwe ophahleni gumbi. Emnyangweni ofanayo kwaba rangefinder.
Zempi uphinde uphume esishintshashintshayo
Tank SU-122-54 yaziwa nangokuthi ukukhiqizwa ngokuthi "Into 600" iye yatha- kabanzi umdlalo World Amathangi ( "World of Kwabonakala izimoto ezinkulu zamasosha"). Akumangazi, kusukela isithakazelo kweSoviet amasu armored ku CIS sisalokhu siphakeme ngokwanele kakade iminyaka eminingi.
In the game, efana enkundleni yempi Okuyınqo, kunoma iyiphi ubuchwepheshe kukhona ubuthakathaka. Ukuze SU-122 ngesikhathi ukushayisana frontal Kunconywa ngokuyinhloko aim at rangefinder sengathi anakho liyincwadi enhle, kunezindlela engeli encane yokuma kwayo indawo, ngaleyo ndlela ethangini kungasilimaza kakhulu.
Lower zempi ipuleti has a Ukuvikelwa enamandla kakhulu futhi kuyaqabukela uphathe ngokonakalisa ethangini. Kuyefana nasendleleni kunjalo, nakuba kunethemba elincane ezinezivikelo eziqinile, namanje isalokhu iwukuxosha utalagu. Pierce izikhali ithangi angakhula esinamandla kakhulu.
Okuningi sengozini ebhodi kanye okuphakelayo zempi kulezi zingxenye 80 no-45 mm, ngokulandelana. Umake hit esikebheni kungabangela umlilo SU-122-54. "World of Kwabonakala izimoto ezinkulu zamasosha" inikeza ezihlukahlukene imishini efana nale moto futhi esasisandulele - T-54.
Kuze kube manje, idatha okunokwethenjelwa khona ikhophi eyodwa kuphela, okuyinto uvezwa armored Kubinka Museum. Kwelinye iminyuziyamu Kiev sika anikezelwe ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe, okwethulwa mbumbulu SU-122-54, okuyinto, eqinisweni, iyona SU-100, ogama isiqu anqunywe. Kukhona nobufakazi ukuthi Abezempi elise Sertolovo ugandaganda, okwakubekelwa kabusha kusukela SU-122.
Ekuhlaziyeni SU-122-54 kubonisa ukuthi ngisho ukuthatha ezinye ngamaphutha umshini ku-akhawunti, imangalelwe. Okungenani, igcizelela inani lamakhophi ikhishwe. Kakade emva test kuqala ukulwa sokuzingela ziza self ezinezinjini ukhishwa ka okubuyayo udumo. Ngemva kwalokho, ngemva ACS kakade kabanzi empini a ilungiselelo yimpumelelo ingezwe nezikhali ngcono. Ezinguqulweni kamuva imodeli Futhi liye egijima ehlukile, isibhamu ezinamandla kakhudlwana. Ngakho-ke, ngokuvamile, SU-122 kungenziwa ngokuthi funa umshini onamandla. Bufakazi baloko ukukhonza izicelo ezivela phambi yomugqa izinduna, ababemi kwelokuthi bona ziye zakhomba ngokunembile ethangini ngisho ngemva kokususwa kwakhe ukuthi kusukela ukukhiqizwa.
Beriya Lavrentiy Palych: ubuntu namandla emlandweni eSoviet Union
Apartments Krasnogorsk - Ukukhetha Large of izipesheli ngamanani yokuncintisana